प्रेरणादायक व्यक्तिगत विकास उद्धरण - डेल कार्नेगी उद्धरण र भनाइ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | Mar 21, 2020 | प्रेरणादायक उद्धरण र भनाइहरू, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइ, उद्धरण |0|
1 डेल कार्नेगी व्यक्तिगत विकास कोटेशन र भनाइहरू
2 डेल कार्नेगी सफलता मा उद्धरण
3 डेल कार्नेगी मनोवृत्ति मा उद्धृत
4 डेल कार्नेगी डर र असफलताको बारेमा उद्धरण गर्दछ
डेल कार्नेगी उद्धरणहरू हालका समयका सबैभन्दा प्रेरणादायक उद्धरणहरू र भनाइहरू मध्येका एक हुन्।
त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले केवल केहि शब्दहरूको साथ तपाईंलाई प्रेरणा दिन र सफलता प्राप्त गर्न प्रेरित गर्न सक्दछ। डेल कार्नेगी यस्तै व्यक्ति थिए। आत्म-विकास र आत्म-सुधारमा ठूलो विश्वास राख्ने, आफ्ना पुस्तकहरूले धेरै मानिसहरूलाई उनीहरूको जीवन अझ राम्रो बनाउनको लागि प्रेरित गरेको छ।
डेल कार्नेगीको विकिपेडिया प्रविष्टि पढ्छ:
"डेल हार्बिसन कार्नेगी (मूलतः १ 1922 २२ सम्म कर्नागे र सम्भवतः पछि) (नोभेम्बर २,, १ 24 - नोभेम्बर १, १ 1888 1) एक अमेरिकी लेखक, व्याख्याता, र आत्म-सुधार, सेल्सम्यानशिप, कर्पोरेट प्रशिक्षण, सार्वजनिक बोलीमा प्रख्यात पाठ्यक्रमहरूको विकासकर्ता थिए। , र पारस्परिक कौशल।
मिसौरीको फार्ममा गरीबीमा जन्मेका उनी हाउ टु विन फ्रेंड्स एण्ड इन्फ्लुएन्स पिपल (१ 1936 XNUMX) का लेखक थिए, जुन आज लोकप्रिय छ।
उनको पुस्तकहरुमा मूल विचारहरु को एक यो छ कि यो गर्न को लागी कुनैको प्रतिक्रिया परिवर्तन गरेर अरुको ब्यबहार परिवर्तन गर्न सम्भव छ।
व्यक्तिगत विकास क्याफेमा हामी शब्दको शक्तिमा पूर्ण विश्वास गर्दछौं। हामी आशा गर्दछौं कि तल डेल कार्नेगी उद्धरणहरूले तपाईंलाई तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न र तपाईंको योग्य सफलता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रेरणाको स्पार्क प्रदान गर्न सक्छ।
डेल कार्नेगी व्यक्तिगत विकास कोटेशन र भनाइहरू
हामी सबैसँग सम्भावनाहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन। हामी त्यस्तो चीजहरू गर्न सक्छौं जुन हामीले सोचेकै पनि सक्दैनौं।
कुनै पनि मूर्ख आलोचना गर्न, निन्दा गर्न र गुनासो गर्न सक्छन् - र अधिक मूर्खहरूले। तर यसले समझ र क्षमा दिन चरित्र र आत्म नियन्त्रण लिन्छ।
यदि तपाई व्यक्ति बन्न चाहानुहुन्छ तपाई बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाई स्वयम् आफू बन्न चाहने व्यक्ति बन्न व्यस्त हुनुहुन्छ।
खुसीको कुरा उसले अर्को व्यक्तिलाई उसको बारेमा के सोच्दछ ठीकै भनिरहेको हुन्छ।
यदि तपाईं सुत्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि उठ्नुहोस् र चिन्तामा बस्नुको सट्टा केही गर्नुहोस्। यो चिन्ता हो जुन तपाईंलाई हुन्छ, निद्राको अभावमा होइन।
डेल कार्नेगी सफलता मा उद्धरण
सफलता तपाईले चाहानुहुन्छ। खुशी तपाईं के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ।
सफल मानिस आफ्नो गल्तीबाट फाइदा लिन्छ र फेरि अर्कै तरिकाले प्रयास गर्दछ।
यो तपाईं के हो, वा तपाईं को हो, वा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, वा तपाईं के गरिरहनुभएको छ त्यसले तपाईंलाई खुशी वा दुखी बनाउँदैन। यो तपाइँको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।
मानिसहरू विरलै सफल हुन्छन् जब सम्म उनीहरूले गरिरहेको काममा रमाईलो गर्दैनन्।
डेल कार्नेगी मनोवृत्ति मा उद्धृत
मानिसहरूले तपाईको बारेमा के भन्छ भनेर चिन्ता गर्नुको सट्टा, किन उनीहरूले मन पराउने केहि हासिल गर्न प्रयास गर्न समय खर्च गरेनन्।
संसारमा धेरै भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू जुनसुकै आशा भएको जस्तो देखिन्छन, प्रयास गरेर राखिएका व्यक्तिहरूले पूरा गरे।
खुशी कुनै बाह्य अवस्था मा निर्भर गर्दैन; यो हाम्रो मानसिक दृष्टिकोण द्वारा संचालित हो।
आज जीवन केवल जीवन हो जुन तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ। आजको धेरै भन्दा धेरै बनाउनुहोस्। केहिमा रुचि राख्नुहोस्। आफूलाई ब्यूँझाउनुहोस्। एक शौक विकास गर्नुहोस्। उत्साहको बतास तपाईं मार्फत जान दिनुहोस्। Gusto संग आज बाँच।
पहिले आफैलाई सोध्नुहोस्: के खराब हुन सक्छ जुन हुन सक्छ? त्यसो भए यो स्वीकार्न तयार गर्नुहोस्। त्यसपछि सबैभन्दा खराबमा सुधार गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
उत्साहपूर्ण कार्य गर्नुहोस् र तपाईं उत्साही हुनुहुनेछ।
“दुईजना जेल जेलबाट बाहिर हेरे,
एउटाले माटो देखे, अर्कोले तारा देखे। ”
आफुलाई माफी पाउनु हो, र तपाईको हालको अवस्था, उर्जा मात्र खेर फाल्ने मात्र होईन तपाईले गर्नु पर्ने नराम्रो बानी पनि।
डेल कार्नेगी डर र असफलताको बारेमा उद्धरण गर्दछ
डर मनमा बाहेक कतै अवस्थित छैन।
असफलताबाट सफलताको विकास गर्नुहोस्। निराशा र असफलता सफलताको लागि दुई निश्चित ढु stones्गा हो।
यदि तपाईं डर जित्न चाहानुहुन्छ भने, घरमा बस्नुहोस् र यसको बारेमा सोच्नुहोस्। बाहिर जानुहोस् र व्यस्त रहनुहोस्।
निष्क्रियताले शंका र डर पैदा गर्छ। कार्यले विश्वास र साहस पैदा गर्छ। यदि तपाईं डरलाई जित्न चाहनुहुन्छ भने, घरमा बसेर यसबारे सोच्नुहोस्। बाहिर जानुहोस् र व्यस्त रहनुहोस्।
मैले महसुस गरेको चिन्ता र चीड पातलो हावामा हराउने बित्तिकै मैले मेरा दिमागमा भएका थुप्रै आशिष्‌हरू खोल्न सकें।
म मानव प्रकृति को बारे मा थाहा सबैभन्दा दुखद चीज को एक हामी सबै जीवित रहन प्रवृत्ति छ। हामी सबै आजको विन्डोज बाहिर फुलिरहेका गुलाबहरुको आनन्द लिनको लागि क्षितिज माथि केही जादुई गुलाब बगैचाको सपना देखिरहेका छौं।
सशक्त रोजगार के जस्तो लाग्छ तपाइँलाई उत्तम कुरा दिन डराउनु हुँदैन। प्रत्येक पटक तपाईले कुनैलाई जित्नु भयो यसले तपाईलाई यति बलियो बनाउँदछ। यदि तपाईं थोरै कामहरू राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भने, ठूलाहरूले तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछन्।
मौका लिनु! सबै जीवन एक मौका हो। जो मानिस सबैभन्दा टाढा जान्छ ऊ सामान्यतया त्यो व्यक्ति हो जो गर्न र हिम्मत गर्न इच्छुक छ।
तपाईं लगभग कुनै पनि डरलाई जित्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं त्यसो गर्न आफ्नो दिमाग बनाउनुहुन्छ भने। सम्झन को लागी, डर मन मा बाहेक कतै छैन।
डेल कार्नेगी आफ्नो शब्दहरु संग धेरै लाई प्रेरित र एक विरासत छोडेको छ कि धेरै वर्ष को लागी जारी रहनेछ। उहाँ व्यक्तिगत विकास र आत्म-विकासमा ठूलो विश्वास गर्नेहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो।
कार्नेगी नेपलियन हिलको सल्लाहकार बन्नुभयो - लेखक सोच्नुहोस् र धनी हुनुहोस् - धेरैले ठूलो व्यक्तिगत विकास पुस्तकहरूमध्ये एक हुन मान्दछन्।
अधिक फेला पार्नुहोस् व्यक्तिगत विकास उद्धरण, प्रेरणादायक उद्धरण र भनाइहरू, प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको उद्धरणहरू र हास्यपूर्ण उद्धरण यसले तपाईंको दिन उज्यालो पार्न सक्छ र तपाईंलाई सफल हुन प्रेरणा प्रदान गर्दछ।
पछिल्लोकम तनावको मतलब बढी तौल भएका महिलाहरूको लागि रगत चिनी कम हुन सक्छ
अर्कोभांग र मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूको नकरात्मक प्रभावहरू
महान Leymah Gbowee उद्धरणहरू जुन प्रेरणा र उत्प्रेरणा दिन्छ
फेब्रुअरी 14, 2017